Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada ISIS oo ka qarxay meel u dhow magaalo xeebeedka Qandala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada ISIS oo ka qarxay meel u dhow magaalo xeebeedka Qandala
December 4, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Qandala waxay qiyaastii 75km dhanka bariga kaga beegantahay magaalada Boosaaso. [Sawairka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ISIS ayaa maanta oo Axad ah ka qarxay duleedka bari ee magaalo xeebeedka Qandala ee gobolka Bari, sida ay ilo-wareedyo ciidamada ah u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror.
Shalay oo Sabti ahayd, ugu yaraan todobo dagaalyahan oo ISIS ah ayaa lagu diley dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda Puntland iyo maleeshiyada ISIS oo ka dhacay deegaanka Bashaashin ee gobolka Bari.
Asbuucii lasoo dhaafay, ciidamada Puntland ayaa bilaabay weerar ay dib u gala wareegayaan maleeshiyada ISIS magaalada Qandala.
December 7, 2016 Ciidamada Puntland oo dib u gala wareegay magaalo xeebeedka Qandala maleeshiyada ISIS
Gaar u-ah: Puntland Mirror oo baaritaan ku sameeyay khaladaadka iyo eedaha musuqmaasuqa ka dhex jira mashruuca dhiraynta magaalada Garoowe
Saddexdii asbuuc ee u dambaysay, warsidaha Puntland Mirror waxa uu baaritaan ku waday eedaha khatarta ah ee musuqmaasuqa mashruuca dhiraynta magaalada Garoowe oo ay fulinayso haayada Care International. Baarayaasha ayaa baaris ku sameeyay dukumentiyo la [...]